सम्भावित प्रादेशिक राजधानीको सडकको दुर्दशा | Indrenionline.com
सम्भावित प्रादेशिक राजधानीको सडकको दुर्दशा
दाङ, २४ मंसिर । मुलुकमा संघीयताको अभ्यास शुरु भइसकेको छ । संघीयताको अभ्यासको सुरुवातीमै दाङलाई प्रदेश नं. ५ को राजधानीका आवाजहरु उठिरहेका छन् । अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट दाङलाई नै ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि दाङ उपयुक्त भएको दावी गरिदै आएको छ ।
प्रादेशिक राजधानी बनाउन एउटा महत्वपूर्ण आधार पूर्वाधार विकास हो । त्यसमा पनि सडक सञ्जाल अत्यन्त महत्वपूर्ण रुपमा हेरिन्छ । तर, प्रादेशिक राजधानी माग्दै ¥याली निकालिने दाङको सदरमुकाम घोराही बजार क्षेत्रको मुख्य सडकको अवस्थाका बारेमा कसैले हेरेको देखिदैन । सडक विस्तार गर्न लागेको वर्षाै भइसक्यो तर, पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले उक्त सडकका दायाँ वायाँका स्थानीयहरुले आफ्नो घरमा जानका लागि पनि पुल हाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
६ लेनको रुपमा विस्तार गर्न लागिएको उक्त सडक निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएको समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन् । २०७१ भदौमा मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालयसँग २०७२ असोजसम्ममा सम्पन्न गर्ने कान्छाराम शंकरमाली निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो समय त के त्यसपछि एक पटकका लागि थपिएको समयमा पनि सम्पन्न हुन नसकेर अहिले पुनः फेरि समय थप्न लागिएको छ ।
सडक कार्यालयले निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउदै आएको छ भने निर्माण कम्पनीले भूकम्प, नाकाबन्दी, आवश्यक मेट्रियलको अभाव, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण देखाउदै आएको छ ।
अहिले सडकको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । सडक दायाँ÷वाँया रहेका विद्युतका पोलहरु सार्न बाँकी छन् । स्थानीयहरुले त्यसमा अवरोध गरिरहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । विद्युत पोल, खानेपानीका पाइप, टेलिफोनका पोल सार्नका लागि सम्बन्धीत निकायहरुसँग सडक कार्यालयले समन्वयमा चासो नदेखाएको निर्माण व्यवसायीको दावी छ । प्रादेशिक राजधानी आफूमा नराम्रो होइन । अब राजधानीको मागसँगै यो सडक विस्तारको कामलाई तीब्रता दिन सम्बन्धीत पक्षलाई पनि दवाव दिने हो कि ?
२४ मंसिर २०७३, शुक्रबार १७:५३
Previous: गजल : तारा पराजुली
Next: क्यान महासंघ दाङको अध्यक्षमा लम्साल
९१४ जनाको भीडमा २८ घण्टा विताएर स्वदेश फर्किएका थिए कोराना सङ्क्रमित व्यक्ति
२२ चैत्र २०७६, शनिबार १८:२४
एकैदिन थप तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण
२२ चैत्र २०७६, शनिबार १८:०५
समाचार संग्रह Select Month April 2020 (16) March 2020 (87) February 2020 (135) January 2020 (142) December 2019 (148) November 2019 (141) October 2019 (77) September 2019 (143) August 2019 (136) July 2019 (105) June 2019 (86) May 2019 (133) April 2019 (85) March 2019 (171) February 2019 (160) January 2019 (226) December 2018 (225) November 2018 (177) October 2018 (177) September 2018 (233) August 2018 (241) July 2018 (243) June 2018 (245) May 2018 (223) April 2018 (239) March 2018 (429) February 2018 (431) January 2018 (421) December 2017 (377) November 2017 (375) October 2017 (242) September 2017 (226) August 2017 (402) July 2017 (411) June 2017 (421) May 2017 (385) April 2017 (249) March 2017 (434) February 2017 (457) January 2017 (688) December 2016 (769) November 2016 (863) October 2016 (729) September 2016 (1056) August 2016 (1104) July 2016 (989) June 2016 (456) May 2016 (354) April 2016 (234) March 2016 (53)